Ingxoxo yomsebenzi wasekhaya Ukusebenzisa iMigangatho yokuSebenzisa iMathematika
Yenza Imisebenzi Yomsebenzi WemiSebenzi Injongo Esebenzisa Inkulumo
I-18% yezifundo zamatriki ezisetyenziselwa umsebenzi wesikolo-yenza ukuba zibale!
Izifundo zemisebenzi yamatriki eklasini zamabanga aphakamileyo ukususela ngo-2010 no-2012 zibonisa umlinganiselo we-15% -20% wexesha leklasi eliqhelekileyo lisetyenziselwa ukuhlola umsebenzi wesikolo. Ukunikezelwa kwexesha elinikezelwe ukuphononongwa ekhaya kwiklasi, inzululwazi ezininzi zemfundo zikhuthaza ukusetyenziswa kwentetho kwiklasi lokufunda izibalo njengesiqhinga sokufundisa esinokunika abafundi ithuba lokufunda emsebenzini wabo wesikolo nakwiontanga zabo.
IBhunga leSizwe lootitshala beMathematika (i-NCTM) ichaza intetho njengale ilandelayo:
"Incoko yintsebenziswano yemathematika eyenzeka eklasini. Inkulumo esebenzayo yenzeke xa abafundi bechaza iingcamango zabo kwaye bacinge ngokungathandabuzeki imbono yabo yeemathematika njengendlela yokwakha izibalo zeemathematika."
Kwinqaku evela kwi-National Council of Mathematics Teachers (NTCM) ngoSeptemba 2015, ebizwa ngokuthi Yenza Uninzi Wokuhamba Ngomsebenzi Wasekhaya, abalobi uSamuel Otten, uMichelle Cirillo, noBhete A. Herbel-Eisenmann bathi ootitshala kufuneka " Phinda ucinge ngamacandelo okuthetha ngamazwi xa uxoxa umsebenzi wesikolo kwaye uhambele kwinkqubo ekhuthaza iMigangatho yokuSebenza kweMathematika. "
Uphando kwiNgxoxo kwiNgxelo yoHlolo lweMatriki
Uphando lwabo lugxile kwiindlela ezahlukileyo zokuba abafundi bathethe inkulumo-ukusetyenziswa kolwimi olubhaliweyo okanye olubhaliweyo kunye nezinye iindlela zokunxibelelana ukubonisa intsingiselo-ekuhambeni umsebenzi wesikolo kwiklasi.
Baye bavuma ukuba uphawu olubalulekileyo lomsebenzi wesikolo kukuba "lunika umfundi ngamnye ithuba lokuphuhlisa izakhono nokucinga malunga nemibono ebalulekileyo yeemathematika." Ukuchitha ixesha eklasini ukuya emsebenzini wesikolo kunika abafundi "ithuba lokuxoxa ngezi ngcamango."
Iindlela zokwenza uphando lwazo zisekelwe kuhlalutyo lwabo lwee-148 ezigcinwe ngeklasi. Iinkqubo zibandakanya:
Ukuqwalasela ootitshala beklasini ngee-degrees ezahlukeneyo (i-novice ukuya ku-veteran) yamava okufundela eklasini;
Ukuqwalasela iiklasi ezisibhozo eziphakathi kwamabanga ahlukeneyo kwizithili zezikolo ezahlukeneyo (ezidolophini, idolophu kunye namaphandleni);
Ukubala ixesha elipheleleyo elisetyenziswe kwimisebenzi eyahlukeneyo eklasini xa kuthelekiswa nexesha elipheleleyo eligcinwe.
Uhlalutyo lwabo lubonisa ukuba ukuhamba ekhaya kwakuqhubekile umsebenzi obalulekileyo, ngaphezu komyalelo osemgangathweni, umsebenzi weqela kunye nomsebenzi wesihlalo.
Ukuhlaziywa komsebenzi waseKhaya kubamba iMat Classroomroom
Ngomsebenzi wesikolo olawula zonke iindidi zemfundo yeematriki, abaphandi bathi ixesha elichithwe ukuqhuba umsebenzi wesikolo lingabakho "ixesha elichithwe kakuhle, okwenza igalelo elilodwa kunye nelinamandla kumathuba abafundi okufunda" kuphela ukuba intetho eklasini yenziwe ngeenjongo Zabo iingcebiso?
"Ngokukodwa, siphakamisa izicwangciso zokuhamba emsebenzini wesikolo odala amathuba okuba abafundi bahlanganyele kwiZenzo zoMathematika eziPhambili zeCore.
Ekuphanduleni iintlobo zentetho eyenzeka eklasini, abaphandi banqume ukuba kukho ezimbini "iipateni zokubala" :
Umzekelo wokuqala kukuba intetho ihlelwe malunga neengxaki ezithile, kuthathwa enye ngexesha.
Umzekelo wesibini ukutyekela intetho ukugxila kwiimpendulo okanye ezichaziweyo.
Ngezansi iinkcukacha nganye kwipatheni ezimbini zibhaliswe kwii-klasi eziyi-148 zevidiyo.
01 ka 03
Umzekelo # 1: Ukuthetha ngaphezu kwamaVs. Ukuthetha ngeengxaki zomntu ngamnye
Uphando lukhuthaza ootitshala ukuba bathethe iingxaki zomsebenzi wesikolo ezifuna ukudibanisa. Izithombe zeGETTY
Le ntetho yenkulumo yayiyinto eyahlukileyo phakathi kokuthetha ngeengxaki zekhaya ngaphandle kokuthetha kwiingxaki zomsebenzi wesikolo
Xa uthetha ngeengxaki zomsebenzi wesikolo, ukutyekela kukugxila kwi-mechanics yengxaki enye kuneengcamango ezinkulu zemathematika. Imizekelo evela kuphando olushicilelweyo lubonisa indlela intetho inokukhawulelana ngayo ukuthetha ngeengxaki zomsebenzi wesikolo. Umzekelo:
UTITSHALA: "Yiyiphi imibuzo enokuba nayo ingxaki?"
UFUNDI (S) ubiza esithi: "3", "6", "14" ...
Ukuthetha ngeengxaki kunokuthetha ukuba ingxoxo yomfundi inokukhawulelwa ekubizeni iinombolo zeengxaki zokuchaza ukuba ngabafundi benza ntoni kwiingxaki ezithile, ngamanye amaxesha.
Ngokwahlukileyo, iintlobo zentetho ezilinganiselwe ngokuthetha kuzo zonke iingxaki zijolise kwiingcamango ezinkulu zemathematika kwiinkcukacha kunye nokuchasana phakathi kweengxaki. Imizekelo evela kuphando ibonisa indlela intetho inokunyuka ngayo xa abafundi beqaphela iinjongo zeengxaki zekhaya kwaye bacela ukuba bahluke iingxaki omnye nomnye. Umzekelo:
UMTITSHALA: " Phawula konke esikwenzayo kwiingxaki zangaphambili # 3, kunye no-6. Uya kuqhuba _______, kodwa ingxaki 14 yenza ukuba uhambe ngakumbi.
UFUNDI: "Ukwahlukileyo ngenxa yokuba unquma kwisantloko sakho oya kulingana ukuba ______ kuba sele uzama ukulingana nento ethile, endaweni yokuzama ukulinganisa oko kulinganayo.
UTITSHALA: "Ungathi umbuzo # 14 unzima kakhulu?"
Ezi ntlobo zeengxoxo zabafundi ziquka iMigangatho ethile yeMigaqo yeMathematika echazwe apha kunye neengcaciso zabo ezinobomi:
CCSS.MATH.PRACTICE.MP1 Yiba nengqiqo yeengxaki kwaye ukhuthazele ekuxazululeni. Ingcaciso-enobubele-bulumko: Andizange ndilahlekelwe yingxaki kwaye ndizama ukwenza okulungileyo
CCSS.MATH.PRACTICE.MP2 Ukuqiqa ngokucacileyo nangokulinganayo. Inkcazo enobungqina bomfundi: Ndinokuyicombulula iingxaki ngendlela engaphezulu kweyodwa
CCSS.MATH.PRACTICE.MP7 Khangela kwaye usetyenzise isakhiwo. Iingcaciso ezinobungqina zabafundi: Ndinokusebenzisa oko ndiyaziyo ukuxazulula iingxaki ezintsha
02 ka 03
Umzekelo # 2: Ukuthetha ngeempendulo ezichanekileyo kunye neePazamo zabafundi
Le ntetho yenkulumo yayiyinto eyahlukileyo phakathi kokugxila kwiimpendulo ezichanekileyo kunye neenkcazo ngokuchasene no- alking malunga neempazamo zabafundi kunye nobunzima.
Kujoliswe kwiimpendulo ezichanekileyo kunye nenkcazo, kukho ukuthambekela kootitshala ukuba baphinde bavakalise iingcinga kunye nezenzo ngaphandle kokuqwalasela ezinye iindlela. Umzekelo:
UMTITSHALA: "Le mpendulo _____ ibonakala ingekho ... Ngenxa ... (utitshala uchaza indlela yokusombulula ingxaki)"
Xa kugxila kwiimpendulo ezichanekileyo kunye nokuchazwa , utitshala ongasentla uzama ukunceda umfundi ngokuphendula oko bekube yintoni isizathu siphutha. Umfundi obhala impendulo engafanelekanga akanakho ithuba lokuchaza indlela acinga ngayo. Ngeke kubekho ithuba lokuba abanye abafundi bahlaziye abanye abafundi ukuba bacinge okanye baqikelele izigqibo zabo. Utitshala unokubonelela ngeendlela ezingakumbi zokuqulunqa isisombululo, kodwa abafundi abacelwa ukuba benze umsebenzi. Akukho mzabalazo ovelisayo.
Kwintetho malunga neephoso zabafundi kunye nobunzima , kugxininiswe kwindlela okanye abafundi abacinga ngayo ukuze bazisombulule ingxaki. Umzekelo:
UMTITSHALA: "Le mpendulo _____ ibonakala ingekho ... Kutheni? Ucinga ntoni?
UMFUNDI: "Ndandicinga nge _____."
UTITSHALA: "Ewe, masibuyele emuva."
"Ziziphi ezinye izisombululo?
"Ngaba kukho enye indlela?"
Kule fom yentetho kwiiphoso zabafundi kunye nobunzima, kugxininise ekusebenziseni iphutha njengendlela yokuzisa abafundi (abafundi) ekufundeni okujulileyo kwezi zinto. Umyalelo eklasini ungacaciswa okanye uzaliswe ngumfundisi okanye oontanga.
Abaphandi kulolu cwaningo bathi "ngokuchonga nokusebenza ngeempembelelo kunye, ukuhamba emsebenzini wesikolo kungancedisa abafundi ukuba babone inkqubo kunye nexabiso lokunyamezela ngeengxaki zomsebenzi wesikolo."
Ukongeza kwiMigangatho yeMathematika eSebenzisi esetyenziselwa ukuthetha ngeengxaki, iingxoxo zabafundi kwiiphutha kunye neengxaki zibhalwe apha kunye neengcaciso zabo ezinobomi:
CCSS.MATH.PRACTICE.MP3 Yakha iingxabano ezifanelekileyo kwaye uhlalutye ukuqiqa kwabanye.
Ingcaciso-enobubele-bulumko: Ndiyakwazi ukuchaza ukucabanga kwam math kunye nokuthetha nabanye
CCSS.MATH.PRACTICE.MP6 Yiya kuchanekileyo. Ingcaciso enobungqina bomfundi: Ndingasebenza ngokucophelela kwaye ndikhangele umsebenzi wam.
03 ka 03
Izigqibo malunga neMathematika yaseKhaya kwiKlasi leSekondari
IfotoAlto / Laurence Mouton / Getty Izithombe
Njengomsebenzi wesikolo ngokuqinisekileyo kuya kuhlala kusisigxina kwi-classroom eklasini yamatriki, iintlobo zeengxoxo ezichaziwe ngasentla kufuneka zenziwe ukuba abafundi bathathe inxaxheba kwimilinganiselo yokusebenza kwemathematika eyenza baqhubeke behlala, beqiqa, bakhe iziphakamiso, bajonge isakhiwo, kwaye bachaneke mpendulo.
Nangona ingekho yonke ingxoxo iya kuba yinde okanye isityebi, kukho amathuba amaninzi okufunda xa utitshala enenjongo yokukhuthaza intetho.
Kwinqaku yabo epapashweyo, Ukwenza Uninzi Lokuhamba Ngomsebenzi Wasekhaya, abaphandi uSamuel Otten, uMichelle Cirillo, kunye neBhete A. Herbel-Eisenmann nethemba lokwenza ootitshala beematriki bazi ukuba bangayisebenzisa njani ixesha lokuphononongwa komsebenzi ngokuphindaphindiweyo,
"Iipatheni ezongezelelweyo esiziphakamisayo zigxininisa ukuba umsebenzi wesikolo sasekhaya-kwaye, ngokongezelela, izibalo ngokwazo-azikho ngeempendulo ezichanekileyo, kodwa kunokuba, malunga nokuqiqa, ukudibanisa nokuqonda iingcamango ezinkulu."
Ukupheliswa kweSifundo sikaSamuel Otten, uMichelle Cirillo, noBhete A. Herbel-Eisenmann
Izifundo zoSuku lweeVeteran
Imisebenzi yamagumbi okufundela: Iifayili zexesha elivavanywa nguMfundisi
Imisebenzi yeSikolo saseKolo
'UHarold kunye neSicwangciso soFundo sePrayon'
Iprojekthi yeBakala yeBakala yeBili
Ukufundisa kuVavanyo: I-Pros and Cons
Ikhefu leKrisimesi neliHlabathi Iholide Igama loLwimi lwe-100
Isicwangciso seSakhono seMatriki esiPhezulu seBanga lokuQala
Ukudibanisa i-Mythology yamandulo yeGrike kwiNkolo
Imibiko yeMozulu yeMnandi, iiRhwebo kunye neeBloop
I-Asiriya: Isingeniso kwiBukhosi boMandulo
Ukuhlelwa kweHalloween kunye nabaQali beNdaba
Isizathu sokuba abanye abaConservative baxhathise umtshato womtshato
Ukuqhagamshelana phakathi kukaDkt Seuss, uRosetta Stone kunye noTheo LeSieg
Ukuthintela nokuLawula iCommifer Coniferal Diseases
Ngaba iigrafu zibulala iiAnts zomlilo?
Iipopayi eziyi-100 eziphezulu zeengoma ze-2003
I-Elephant Antiquus (I-Elephas Antiquus)
Izizathu eziphezulu ezi-10 zokuvukela eSiriya
Imijikelezo yaseMilankovitch: Indlela uMhlaba kunye neLanga elibandakanya ngayo
Uluhlu olupheleleyo lweePosidon's Loves kunye nezingane zabo
Ukubuyela esikolweni kwiMidlife
Ubukhosi baseRoma: iMfazwe yehlathi laseTeutoburg
I-Architecture eCalifornia, Isikhokelo sohambo oluqhelekileyo
I-ARGAS Igama lomnqophiso kunye neMvelaphi
Cailleach, uMlawuli weHlabathi
Yonke into oyifunayo ukwazi ngoVince McMahon kunye nosapho lwakhe